CollegeBound Saint Paul, maatii Saint Pauliif abdii dha
Daa’ima keessan CollegeBound Saint Paul keessatti galmeessisuuf daandii hedduutu jira.
Erga isaan dhalatanii booda karaa sarara kompuuteraa galmeessisuu ykn akkumma isaan dhalataniin battalumatti akka beekamuuf galmee isaanii ifaa fi biliisan (kan sabaa) akka ta’uuf filachuu keessan raggaasisuu.
Daa’ima keessan CollegeBound Saint galmeessuu kan dandeessan yoo isaan guyyaa gaafa Amajjii 1, 2020, kan dhalatan ta’ee fi ulaagaa armaan gadii keessaa tokko kan guutan ta’e qofaa ta’a:
Bakka dhalootaatiin jiraataa Saint Paul ta’uu YKN
Guyyaa dhaloota isaanii kan waggaa ja’affaa dura jiraataa Saint Paul ta’uu.
Daa’imni tokko akka jiraataa Saint Paul fudhatamuu kan danda’u, yoo xiqqaate abbaa ykn haati, eegduun, ykn guddiftuun yoo bakka jireenya isaanii Seeyint Poul keessa kan godhatan ta’e.
Yoo daa’imni keessan xiqqaan karaa irra jiraate, CollegeBound Saint Paul dursee-galmeeffamuu isaa sirriitti adda baasuu. Dhalachuu isaa/ishee dura galmeessuun daa’ima keessan sagantaa kanaaf kan galmeessisu miti. Kanaafuu, yeroo daa’imni keessan dhalatutti akka galmeesitaniif isin yaadachiifna.
CollegeBound Saint Paultti erga galmeessitaniin booda, karaa sarara e-meeyilii isa odeeffannoo, akkamittiin akka lakkoofsa herregaa kan daa’ima keessanii guutuuf fayyadamtan sanaa waraqaan simannaa kan baga nagaan dhuftan jedhu isiniif kan kennamu ta’a. Yeroo sanattis, haftee horii, qarshii kuufame, fi kan biroon hagam akka ta’e beekuutu danda’ama.
Gaaffiiwwan kamiin iyyuu?
Gaaffiiwwan yeroo hedduu gaafataman
Yeroo dhalachuu daa’ima kanaatti galmeesisuu
Daa’imman galmeen dhaloota isaanii ifaa fi biliisaan galmeeffaman battalumatti CollegeBound Saint Paul keessatti kan galmeeffaman ta’u.
Yeroo dhalachuu daa’ima keessaniitti yammuu seenaa dhalachuu daa’ima kanaa galmee irratti guuttanitti gaaffii isa ‘Galmeen dhaloota kun ifaa fi biliisa (public) akka ta’u ni hayyamtuu?’ kan jedhuuf “Eeyyee” jechuu keessan sirriitti raggaasisaa.
Yoo galmeen dhalootaa kun akka inni ifaa fi biliisa (public) hin taane barbaadanis, ni dandeessu! Dursitaniis daa’ima keessaniif galmeessuu ni dandeessu.
Maatiin ijoollee warri galii gad-aanaatii hanga giddu-galeessaatti qaban kanneen qusannoo akkaawontii kolleejjii irraa doolara $1 fi $500 gidduu qaban:
Galmee karaa sarara dirsariitii
ammuu daa’imni keessan dhalatu, unka karaa sarara dirsariitii guutuudhaan CollegeBound Saint Paultti isaaniin galmeessisuu dandeessu.
Har’a daa’ima keessan galmeessisuuf waanti barbaachisu yoo jiraate:
Odeeffannoo daa’ima keessanii
Maatii jalqabaa/Guddiftuu fi /ykn maatii sadarkaa lammaffaa/Odeeffannoo guddiftuu
Dursa-galmee CollegeBound Saint Pauliif
Yammuu daa’ima keessan dursitanii galmeessitanitti, kan nuti isin yaadachiifnu sagantaa kana keessatti akka isaaniin galmeessitanii dha. Waantootni isin dursitanii galmeessuun isin irraa eegamu:
• Maqaa ofii keessanii
• Lakkoofsa Bilbilaa fi/ykn e-meeyilii
• Guyyaa dhaloota daa’ima keessanii
Dursitanii erga galmeessitaniin booda, nuti ammoo erga daa’imni sun dhalateen booda CollegeBound Saint Paultti akka galmeessitaniif yaadachiisa isiniif kan erginu ta’a.
Daa’imni keessan isa kanatti filatamuuf mirga guutuu qabaatu:
• Magaalattii keessaa lakkoofsa lakkoofsa qusannaa kolleejjii kan $50 qabaachuu
• Kaffaltii dabalataa argachuu, qusannoon isaanii akka guddatuuf
• Faayidaa yeroo ijoollummaa
• Maatii keessan guutummaatiif carraa maallaqa argamsiisuu danda’u
Faayidaa maatiin Akkaawontii Qusannoo kan Kolleejjii irraa agratan
Abdii maatiin waa’ee barnoota ijoollee isaaniitiif qaban kan jajjabeessu ta’a
Guddina hawaasummaa fi dhageettii miiraa kan jajjabeessu ta’a
Nageenya sammuu haawwanii kan fooyyessu ta’a
Gaaffiilee Yeroo hedduu Gaafataman kan